ရှိရာဆခိခိုင်းယောပန်းခြံ ၏ ရှိရာဆခိပင်လယ်ကမ်းနား(ဝဂယမ)
ဒဇိုင်းဖုတန်းမန်းဂူး(ဖုကုအိုခ . ဟာခတ)
ဟို့ တိုယူဒဘူတာ (အိဝတဲ)
ဟခိုးနဲ ကောင်းကင်ကြိုးလို(ဟခိုးနဲ )
သစ်သားလမ်းကလေး၏ တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးတွင်ရှိပြီး ချုခုဘချောအနေဖြင့် စည်...
ခူမိကျွန်းရဲ့ အရှေ့ ဘက်ခြမ်း ၊ အိုအုကျွန်း ၊ အိုဟကျွန်းရဲ့ ကမ်းလွန်...
၁၉၆၄ ခုနှစ်မှ စတင်ပြေးဆွဲတဲ့ ခရီးသွားလည်ပတ်သင်္ဘောဖြစ်တယ်။ အနီ၊ အစိမ်...
နိုတိုကျွန်းဆွယ်အမျိုးသားဥယျာဉ်မှာ ပါဝင်ပြီး တိုးယာမခရိုင် တာကအိုတြ...
ကျိုတိုဖုရဲ့ အလယ်လောက်မှာ ရှိပြီး ခရိုင်တွင်း ကျယ်ပြန့် တဲ့ ဧရိယာတေ...
ပင်စည် ၄.၃ မီတာ၊ အမြင့် ၁၈ မီတာရှိသော တစ်ပင်တည်းသော ဆာကူရာ။ သက်တမ်း...
ချမ်းအေးသောဆောင်းရာသီတွင်သာလျှင် သွားကြပါစို့ဆောင်းရာသီတွင်သာလျှင် ( ဇန်န...
( ဇူလိုင်လကို အကြံပြုချင်ပါတယ် ) နည်းနည်းစောတဲ့နွေရာသီကို အပြည့်အဝခံစားနိုင...
( တစ်ခါကြည့်ရုံဖြင့် သိကြလား ! ) ဂျပန်တစ်နိုင်ငံလုံး အာဂျိဆိုင်းပန်းပွင့်ခြ...
( ဇွန်လကို အကြံပြုချင်ပါတယ် ) ဖြေသိမ့်မှုပေးနိုင်မယ့်ရှုခင်း ၁၀ ခု လက်ရွေးစင်
ရွှေရောင်ပိတ်ရက်ရောက်လာပြီး မေလတွင် သွားချင်သောနေရာ